Lego Ideas နှင့် BrickLink သည်ထုတ်လုပ်ရန်ပူးပေါင်းနေသည် Ideas အဆိုပါအားဖြင့်ပယ်ချခဲ့သောစီမံကိန်းများကို Lego Group မှ။
ယခုနှစ်တွင်စံချိန်တင်နံပါတ်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည် Ideas စီမံကိန်းများပြန်လည်သုံးသပ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိ။ မျက်စိကျစရာ ၂၆ ခုသည်မဲအတွက် ၁၀,၀၀၀ အချိန်ရရှိခဲ့သည် ပထမ ဦး ဆုံး 2020 ပြန်လည်သုံးသပ်အခြား 35 ရောက်ရှိစဉ် ဒုတိယသုံးသပ်ချက်ကို။ အနည်းဆုံးအရေးအသား၏ထိုအချိန်က နောက်ထပ် 22 စီမံကိန်း တတိယ ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပါဝင်ရန်သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်နှစ်လျှင်လေးကြိမ်မှ ၅ ခုအထိသမိုင်းကြောင်းအရထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာအတွက်အစိမ်းရောင်မီးလုံးသည်ထိုအဆိုပြုချက်များအားလုံးလုံးလျားလျားမဖြစ်နိုင်ပါ။
Lego Ideas BrickLink Designer Program နှင့်ပြthatနာဖြေရှင်းနည်းကိုရှာကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ စမ်းသပ်အစီအစဉ်သည်ယခင်ကငြင်းပယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းများအားအုတ်များဖြင့်ရှင်သန်စေမည်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်များအနေဖြင့်အလွန်အမင်းတောင်းခံထားသည့်အစုများပေါ်တွင်သူတို့လက်ကိုရယူရန်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ ပြင်ပဉာဏပစ္စည်းမူများကို အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းများသည်အစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ Nathan Sawaya ၏အသေးစား YELLOW နှင့် Jason Allemann ၏ကြိုးပမ်းမှုများအပါအ ၀ င်စီမံကိန်းများစွာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော် BrickLink ထံမှဝယ်ချင်ပါတယ်ငြင်းပယ်အစုံ.
အစီအစဉ်၏အမြစ်များမှာတည်ရှိသည် စစ်တမ်းတစ်ခု က run Ideas BrickLink မှတဆင့်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောပယ်ချခဲ့သည့် 10K စီမံကိန်းများကိုကြည့်လိုပါသလားဟုမေးသူများကိုနိုဝင်ဘာလကအဖွဲ့ကဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းသည်အဆိုပြုချက်ကို“ အလွန်ထောက်ခံ” ကြသည်။
'BrickLink Designer Program' moniker သည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လျှင်ယင်းသည်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော AFOL Designer Program ၏ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ BrickLink Marvin Park ဥက္ကHead္ဌကအတည်ပြုသည်။ ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်.
ဤကြေငြာချက်က ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အစီအစဉ်သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းသို့သွားမည်ဟုအတည်ပြုသည်။ BrickLink က AFOL အချို့အားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းများကိုတင်ပြရန်စိတ်ပျက်ရလိမ့်မည်ဟုဝန်ခံသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူပလက်ဖောင်းသည် '' AFOL အသိုင်းအဝိုင်းများ၏အသံကိုထင်ဟပ်စေသောနှစ်ပတ်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲအစီအစဉ်များ '' ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်ကတိပေးထားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်မူလပုံစံသို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အစီအစဉ်သစ်ဟာကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါကဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်တယ် အ LEGO Group BrickLink လေးလည်း နှောင်းပိုင်းတွင် 2019 ၌တည်၏။
တရား ၀ င်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ“ ရည်မှန်းချက်သည်ပရိသတ်များရန်ပုံငွေရှာခြင်းဖြင့်သင်၏အိပ်မက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်ပရိသတ်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဆက်လက်ကျင်းပရန်ဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတွင်ပလက်ဖောင်းသို့ရောက်ရှိလာသောပယ်ချခံရသော 10K စီမံကိန်းများသည်အနည်းဆုံးကျောထောက်နောက်ခံပြုသူများကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုအကြံပြုထားသည် ။
BrickLink သည်စတင်ဆက်သွယ်လိမ့်မည် Ideas အသုံးပြုသူများသည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိရန်မျှော်လင့်သည်။
← တရုတ်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး LEGOLAND ပန်းခြံကိုဆောက်လုပ်နေပြီ
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Imperial Nebulon Frigate →